YoYa Busy Life World Apk Android का लागि डाउनलोड [खेल] - लुसो गेमर
YoYa Busy Life World Apk Android को लागि डाउनलोड गर्नुहोस् [खेल]
जनवरी 22, 2022 by जोन स्मिथ
के तपाईं अन्वेषण गर्न तयार हुनुहुन्छ र यो नयाँ गेमप्ले खेल्दै आफ्नो सपनाको संसारको आनन्द लिनुहोस्? यदि हो र खेल डाउनलोड गर्न अनलाइन स्रोत खोज्नुहोस्। त्यसपछि हामी ती प्रशंसकहरूलाई हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस् र यहाँबाट नवीनतम YoYa Busy Life World डाउनलोड गर्न सिफारिस गर्छौं।
यद्यपि संरचना र नयाँ ठाउँहरू अन्वेषणको सन्दर्भमा कोही पनि सिद्ध छैन। तर निर्माण र अन्वेषण वस्तुहरू रोचक मानिन्छ। जहाँ विभिन्न अद्वितीय अपरेसनहरू र ठाउँहरू छन् त्यहाँ भ्रमण र अन्वेषण गर्न।
त्यसैले तपाईं कार्टुनहरूको यो नयाँ संसारको आनन्द लिन तयार हुनुहुन्छ। र निर्माण गर्न र संसार भित्र बस्न तयार छन् जहाँ चीजहरू गेमरहरूको इच्छा अनुसार चलाइनेछ। त्यसपछि गेमिङ एपको नवीनतम संस्करण डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्।
YoYa व्यस्त जीवन विश्व Apk के हो
YoYa Busy Life World Android एक उत्तम अनलाइन प्लस अफलाइन गेमिङ अनुप्रयोग हो। यसले बालबालिका र वयस्कहरूलाई अनन्त अवसरहरूको आनन्द लिन अनुमति दिन्छ। तर संसारको निर्माण र प्रबन्ध गर्दै जहाँ सबै अपरेशनहरू र गतिविधिहरू खेलाडीहरूद्वारा नियन्त्रित हुन्छन्।
गेमप्लेले यो उन्नत प्रदान गर्दछ 2D प्रदर्शन सिद्ध यथार्थवादी संसार संग। यहाँ गेमप्ले भित्र, खेलाडीहरूलाई धेरै क्यारेक्टरहरू निर्माण गर्न निर्देशन दिइन्छ र गेमरहरूले ती एनिमे कार्टुनहरू ड्रेस अप गर्न सक्छन्। साथै तिनीहरू बस्न, सुत्न, दौडन र अन्य गतिविधिहरू गर्न सक्छन्।
गेमप्लेलाई थप रोचक र सरल बनाउन विशेषज्ञको इम्प्लान्ट यो ड्र्याग एण्ड ड्रप विकल्प। जहाँ सहभागीहरूले सजिलैसँग धेरै अपरेशनहरू व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। केवल वस्तुहरू समातेर र त्यसपछि ती दिशा देखाउने विभिन्न स्थानहरूमा राखेर।
याद गर्नुहोस् कि यो गेमरहरूका लागि संसार निर्माण गर्नको लागि उत्कृष्ट अवसर घोषित गरिएको छ। जहाँ प्रणाली र जीवन स्तरहरू सेट र सहभागीहरूले मात्र नियन्त्रण गर्नेछन्। सुन्दर ठाउँहरूको भ्रमणले अद्वितीय र रचनात्मक विचारहरू बढाउन मद्दत गर्नेछ।
नाम YoYa व्यस्त जीवन संसार
आकार 471 एमबी
विकासकर्ता योया विश्व
प्याकेज नाम com.novakids.busylifeworld
श्रेणी खेल - शिक्षा
यद्यपि हामी गेमप्ले भित्र कुनै पनि प्रतिबन्धहरू देख्न असमर्थ छौं। र विकासकर्ताहरूले संसार प्रदान गर्ने दावी गर्छन्, जहाँ अवसरहरू अनन्त छन्। थप रूपमा, गेमप्ले स्थिर इन्टरनेट जडान बिना अफलाइन मोडमा सहज रूपमा चल्न सक्छ।
मुख्य स्थानहरू ती अन्वेषण गर्न तयार छन्। जस्तै माई होम, सपिङ मल, हेयर सैलुन, ब्यूटी पसल, फेसन स्टोर र पिकनिक प्लेस आदि। मेरो घरको स्थान सीधै निर्माण गरिएको भवनसँग सम्बन्धित छ जहाँ एनिमेहरू सुत्छन्, बस्छन् र फुर्सदको समयको आनन्द लिन्छन्।
शपिङ मल एक ठाउँ हो जहाँ गेमरहरूले धेरै वस्तुहरू खरिद गर्न अनुमति दिन्छ। यसबाहेक, मललाई3धेरै स्तरहरूमा विस्तार गरिएको थियो, जसको मतलब आगन्तुकहरूले अब चलचित्रहरू हेर्न, मिनी-गेमहरू खेल्न र विभिन्न किराना सामानहरू खरिद गर्न सक्नेछन्।
कपाल सैलून र सौन्दर्य पसल पनि भ्रमण गर्न उपलब्ध छ। हेयर सैलून कपाललाई बढ्न र स्वस्थ बनाउनको लागि थप सर्तहरू काट्नको लागि उत्तम ठाउँ हो। सौन्दर्य पसल पूर्ण अनुहार रूपान्तरणको लागि उपयुक्त छ। हो, अब सौन्दर्य पसलले सौन्दर्य सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्नेछ।
कसैले पनि गेमप्ले भित्र फेसन स्टोरको अपेक्षा गरेको छैन। तर अब यो उपलब्ध छ र विभिन्न लुगाहरू परिवर्तन गर्नका लागि उत्तम छ। त्यसैले तपाईं एक उत्तम संसार भित्र बस्ने खाली समयको आनन्द लिन इच्छुक हुनुहुन्छ। त्यसपछि YoYa Busy Life World डाउनलोड को अद्यावधिक संस्करण स्थापना गर्नुहोस्।
विस्तृत लाइभ कस्टमाइजर थपिएको छ।
यसले चरित्र पोशाक, लुक र कपाल आदि परिमार्जन गर्न मद्दत गर्दछ।
दुई फरक प्ले मोडहरू थपिएका छन्।
धेरै ठाउँहरू अन्वेषण गर्न।
विभिन्न पुरस्कारहरू छनौट गर्न उपलब्ध छन्।
समायोज्य ड्यासबोर्डको साथ उत्तरदायी गेमप्ले।
अनलाइन र अफलाइन दुवै खेल्नुहोस्।
गेमप्ले इन्टरफेस 2D राखिएको थियो।
YoYa व्यस्त जीवन विश्व खेल कसरी डाउनलोड गर्ने
गेमिङ अनुप्रयोग प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न पहुँचयोग्य छ। तर केही प्रमुख समस्याहरूको कारण, धेरै एन्ड्रोइड गेमरहरूले त्यहाँबाट गेमप्ले डाउनलोड गर्न असमर्थ छन्। त्यसोभए यस्तो अवस्थामा खेलाडीहरूले के गर्ने?
यसैले तपाई केटाहरू अलमलमा हुनुहुन्छ र गेमप्ले डाउनलोड गर्नको लागि उत्तम अनलाइन स्रोत खोज्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइटमा जानुपर्छ र गेमिङ एपको अद्यावधिक संस्करण डाउनलोड गर्नुपर्छ। एक क्लिक डाउनलोड विकल्प संग नि: शुल्क।
डाउनलोड सेक्सन भित्र एउटा अनुप्रयोग प्रस्ताव गर्नु अघि, हामी विभिन्न स्मार्टफोनहरूमा Apk स्थापना गर्छौं। हामीले यो विशेष गेमप्लेको लागि प्रक्रिया दोहोर्याउँछौं र भित्र कुनै ठूलो समस्या फेला परेन। यसको मतलब यो खेल स्थापना गर्न विशुद्ध रूपमा सुरक्षित छ।
अन्य धेरै शिक्षा-सम्बन्धित गेमिङ एपहरू यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा प्रकाशित छन्। ती अन्य सम्बन्धित शैक्षिक अनुप्रयोगहरू र खेलहरूको आनन्द लिन कृपया URL को पालना गर्नुहोस्। जो हुन् मेरो टाउन वर्ल्ड एपीके र दृश्य छाला ML Apk.
यदि तपाइँ तपाइँको कान्छी बहिनी र भाइ को लागी सबै भन्दा राम्रो अनलाइन र अफलाइन कार्य खेल को लागी खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी खेलाडीहरूलाई YoYa Busy Life World Apk स्थापना गर्न सिफारिस गर्छौं। जुन डाउनलोड गर्न नि:शुल्क छ र कुनै सदस्यता वा दर्ता आवश्यक पर्दैन।
विभाग शिक्षा, खेल ट्याग थ्रीडी खेल, YoYa व्यस्त जीवन संसार, YoYa व्यस्त जीवन विश्व Apk, YoYa व्यस्त जीवन विश्व डाउनलोड, YoYa व्यस्त जीवन विश्व खेल मेल अन्वेषण
MXC Exchange एप २०२२ एन्ड्रोइडका लागि नि:शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस् [अनलाइन ट्रेडिंग]
ओह माई योकाई एपीके एन्ड्रोइडका लागि डाउनलोड गर्नुहोस् [अद्यावधिक २०२२]